Harena an-kibon’ny tany : mizara traikefa matihanina i Aostralia | NewsMada
Harena an-kibon’ny tany : mizara traikefa matihanina i Aostralia
Nihaona, omaly teny Ampandrianomby, ny masoivoho vaovaon’i Aostralia, Rtoa Jennifer Dee sy ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany, Zafilahy Ying Vah. Manana traikefa lehibe momba ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany i Aostralia sady efa manana orinasa eto an-toerana, toy ny Rio Tinto, Toliara Sands. Dinika nifanaovan’ny roa tonta ny hanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena roa tonta, hanome traikefa ho an’i Madagasikara. Nohamafisin’ny minisitra Zafilahy Ying Vah ny tokony haha matihanina ny asa amin’ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany.
“Ny zava-misy ankehitriny, saika eo am-pelatanan’ny Malagasy avokoa ireo fahazoan-dalana 4.000 nomena tany aloha, nefa tsy miasa ny maro amin’ny tompon’izy ireny fa mivarotra izany fahazoan-dalana izany fotsiny, lasa miteraka olana maro”, hoy ny minisitra. Izao fiaraha-miasa amin’i Aostralia izao, araka ny traikefa omeny, hoentina hanomezana vahana izay tena matihanina sy fandrafetana bokin’andraikitra vaovao.
Homen-danja manokana ao anatin’izany bokin’andraikitra izany ny fitsinjovana ny tontolo iainana. “Rehefa azo antoka sy matihanina amin’izany asa izany, azo atao tsara ny manombana ny harena an-kibon’ny tany. Miainga amin’izay tombana izay ny hamaritana laminasa fohy ezaka sy lavitra ezaka”, hoy ny minisitra. Marihina fa any amin’ny faritra fantatra fa misy vokatra betsaka ny nametrahana ny Bam (Bureau d’administration minière), mampanara-dalàna, mamantatra sy manaraka fivoahan’ny vokatra. Ezaka tsy maintsy atao izany, tsy hahavery ny harem-pirenena sy hampitombo ny vola miditra ho an’ny faritra sy ny fanjakana foibe. Efa misy ny dingana vita, saingy tsy ampy.